यार्सा संकलनमा स्थानीयलाई अनुमति- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
संक्रमितको अनुगमन न व्यवस्थापन
यसपटक क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गरिएको छैन । संक्रमण पुष्टि भए पनि आइसोलेसनमा बस्नु पर्दैन । संक्रमितहरू परिवारमै घुलमिल भइरहेका छन् ।
वैशाख २१, २०७८ प्रदेश ब्युरो
भैरहवा — गत वर्ष नाकाबाट भित्रिएकालाई सीमावर्ती जिल्लाका विद्यालय र सामाजिक भवनमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा राखिन्थ्यो । दुई साता क्वारेन्टाइनमा बिताएपछि घरमा पठाउने गरिन्थ्यो । पर्याप्त क्वारेन्टाइन नहुँदा कोचाकोच गरेर राखिएको थियो । व्यवस्थापन भद्रगोल थियो । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनले कोरोना संक्रमण समूहमा फैलिएको गुनासो थियो ।
त्यसबेला भारतबाट आउनेलाई व्यवस्थित तरिकाले भित्र्याउन चुकेको र क्वारेन्टाइन भद्रगोल बनेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो । आलोचित बनेपछि सरकारले विभिन्न नाकाबाट भित्रिनेको नाम र ठेगाना संकलन गरेर उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन थाल्यो । सम्बन्धित स्थानीय तहले छुट्टै क्वारेन्टाइनको साटो घरमै अलग्गै बस्ने सर्तमा पठाउन थाले । कोरोनाको दोस्रो लहर व्यापक भइरहेका बेला यसपालि पनि नाकाबाट प्रवेश गरेका सर्वसाधारण सिधै परिवारमा घुलमिल भइरहेका छन् । पहिले जस्तो स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिक ओसार्न गाडीको व्यवस्था गरेका छैनन् । उनीहरू मुलुक प्रवेश गरेपछि सार्वजनिक यातायातका साधन चढेर घर पुगिरहेका छन् ।
अहिले नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा ज्वरो आएका र लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्रै कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ । सिमानामा खटिएका कर्मचारीले संक्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । जसले गर्दा उनीहरू संक्रमित बनिरहेका छन् । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका–३ का ४५ वर्षीय हीरासिंह नेपाली गत वैशाख २ गते भारतबाट सिधै घर आए । ज्वरो, रुघाखोकीले ग्रस्त पारेपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भयो । वैशाख ११ गते राति उनको घरमै निधन भयो । अहिले धेरै जना सिधै घरमा आइरहेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली धमाधम भित्रिएका हुन् । बसमा आउँदा धेरैले मास्क लगाएका हुँदैनन् । ‘जागिर छाडेर वैशाख १० गते घरमा आइपुगें,’ गुजरातबाट आएका मदाने गाउँपालिका–२ का भीमबहादुर विकले भने, ‘घरसम्म आइपुग्दा कसैले केही भनेनन्, म त सिधै आएँ । कोरोना छ छैन मलाई थाहा छैन, बिरामी भएमा चेक गराउँछु ।’
उनी ६ जना साथीसँगै घरमा आएका हुन् । एक वर्षअघि चैतमा घर आउँदा स्थानीय विद्यालयमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । यसपटक त्यस्तो व्यवस्था छैन । गाडीमा भीडभाडमै यात्रा गरेर घरसम्म आइपुगेको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार भारतबाट आउनेहरू अहिले सिधै घर गएका छन् । १२ स्थानीय तहले कसैले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माण गरेका छैनन् । १४ दिनसम्म घरमै सुरक्षित बस्न विभिन्न माध्यमबाट सूचना जारी गरेको उनले बताइन् ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित सीमामा चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दै आएकी एक महिला गत वैशाख १५ गते संक्रमित भइन् । नाकामै रहेको हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी डेरामै आइसोलेसनमा छिन् । कपिलवस्तु–३, आनन्दवागका कोरोना संक्रमित एक अधिकृत घरमा आइसोलेसनमा छन् । ‘सबैसँग हेलमेल भइरहेका छन्,’ एक स्थानीयले भने, ‘हामीलाई गाह्रो छ ।’ यसपटक संक्रमितका लागि स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छैनन् । सबैलाई घरमै बस्न भनिएको छ । घरमै बसेकाको अनुगमन छैन । ‘यसले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ,’ कपिलवस्तु–२, बरगदवाका पशुपतिमणी त्रिपाठीले भने, ‘यहाँका नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई मतलबै छैन ।’
नाकामा संक्रमण पुष्टि भए पनि त्यस्ता व्यक्तिको तथ्यांक राखिएको छैन । उनीहरू कहाँ छन् ? कसरी बसेका छन् ? कसैलाई कुनै जानकारी छैन । कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहले आइसोलेसन बनाएका छैनन् । स्थानीय तहले बाहिरबाट आउनेलाई कुनै सरोकार राख्दैनन् । ‘संक्रमित निस्फ्रिक्री डुलिरहेका छन्,’ शिवराज नगरपालिकाका अनुपकुमार चौधरीले भने, ‘यसले हामी स्वस्थ मान्छे पनि घरभित्रै खुम्चिनुपरेको छ ।’
पाल्पाको रम्भा–३, पीपलडाँडाका एक युवा गत साता भारतबाट फर्केर परिवारमा घुलमिल भए । उनी खोकखोला, लसुने लगायत बजार पुगे । स्थानीयको दबाबमा पीसीआर परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण पुष्टि भयो । अहिले होम आइसोलेसनमा छन् । माथागढी–४, देवगीर गाउँ सिल गरिएको छ । ५०/६० घरका कसैलाई अहिले बाहिर निस्कन दिइएको छैन । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केशव जीसीका अनुसार दुई जनामा ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने भएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । होम आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका ११ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा नौ जनामा पोजेटिभ देखियो । ती नौ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आधारमा बस्तीका ५ सय जनाभन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘देउगीर बजार र नजिककालाई बाहिर निस्कन दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘सबै पसल, बजार बन्द गरिएको छ ।’ उनका अनुसार होम आइसोलेनसबाट झन् समस्या आउने देखिएको छ । ‘घरबाहिर ननिस्कन भनेका छौं तर बाध्य भएर केही काम भन्दै निस्कन्छन्,’ उनले भने, ‘जतिबेला पनि गोठालो गर्न नसकिने भएपछि झन् समस्या थपिएको छ ।’ गत वर्ष क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन गरेका स्थानीय तह यसपटक सुस्ताएका छन् । ‘गत वर्षमा जस्तो काम भएको छैन,’ रम्भाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शिव अर्यालले भने, ‘स्वाब संकलन, ट्रेसिङको काम पनि गत वर्षको जस्तो छैन ।’
पूर्वी रुकुममा सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत भारत र मुलुकका विभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारण घर फर्किरहेका छन् । को कताबाट कसरी आइरहेको छ, खोजीनीति भइरहेको छैन । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र बुढा क्षत्रीले बाग्लुङको नाकामा कडाइ गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत जिल्ला भित्रिने यात्रुको पूरा विवरण माग गर्ने निर्णय भएको बताए । रोल्पामा पनि विदेश लगायत मुलुकमा विभिन्न स्थानबाट गाउँ फर्किएकालाई सोझै घरमा पठाइएको छ । संक्रमण भए नभएकोबारे जाँच नगरिएकाले अधिकांशलाई सिधै परिवार र आफन्तको सम्पर्कमा जान दिइएको हो ।
म्याट र तन्ना जलाइयो
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा बनाइएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टरका दुई सय म्याट र तन्ना जलाइएको पाइएको छ । गत वर्ष भारत र मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आउनेका लागि गुलरियामा २३ वटा क्वारेन्टाइन र दुईवटा आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको थियो । विद्यालयमा क्वारेन्टाइन र जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्ष र कभर्ड हलमा आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएका थिए । अहिले जिल्लामा संक्रमित बढ्दै गएपछि ती आइसोलेसन सेन्टर चलाउने तयारी भइरहेको छ । यस क्रममा त्यहाँ रहेका म्याट र तन्ना जलाइएको खुलासा भएको हो ।
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार त्यहाँ रहेका धेरै खाटसमेत गायब भएका छन् । नगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन अधिकृत अजय ठाकुरले २३ वटा क्वारेन्टाइनका ८० र आइसोलेसनका १ सय २० म्याट र तन्ना जलाइएको बताए । ‘प्रहरी प्रशासनको रोहवरमा जलाइएको हो,’ उनले भने, ‘गत पुसमा जलाइएको थियो ।’ गत वर्ष कोभिड व्यवस्थापनका लागि २ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये क्वारेन्टाइनका लागि १ करोड ३५ लाख र आइसोलेसनका लागि २२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अधिकृत ठाकुरले बताए । नगरपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत सुनिल पाण्डेले संक्रमण सर्ने जोखिम भएकाले म्याट र तन्ना जलाइएको बताए ।
– मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), माधव अर्याल (पाल्पा), वीरेन्द्र केसी (अर्घाखाँची), कमल पन्थी (बर्दिया), हरि गौतम (रुकुम पूर्व) र काशीराम डाँगी (रोल्पा)
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०९:१९